बाँदर्नी मैयाको कथा- विविधा - कान्तिपुर समाचार
मानिसको मौलिक जात भनेको जम्मा दुइटा हो, एउटा स्त्री र अर्को पुरुष । जात र जातीयताका अरू कुरा सर्वथा कृत्रिम हुन् । पुरुष र नारीका बीच दुर्नीवार आकर्षण नहुँदो हो त मनुष्य उहिल्यै लुप्त भइसक्थ्यो ।
माघ ५, २०७५ प्रदीप गिरि
काठमाडौँ — प्रत्येक समाजमा दन्त्यकथा, लोककथा हुन्छन् । पुराण पनि हुन्छन् । दन्त्यकथा, लोककथा र पुराणलाई एक–अर्काको पर्याय मान्नुपर्छ भन्ने छैन । पुराणले सृष्टिको रहस्य बुझ्न खोज्छ । दन्त्यकथा र लोककथाले मानिसको व्यक्तित्व बुझ्न धेरै मद्दत गर्छ ।मैले स्कुल पढ्दा अत्यन्तै चाख मानेर पढेको पुस्तक हो, बोधविक्रम अधिकारीको ‘नेपाली दन्त्यकथा’ ।
दन्त्यकथा चाखलाग्दो हुन्छ । बालक र किशोर त्यसै झुम्मिन्छन् । त्यो संकलन मैले यसपटक फेरि खोजेँ । साझा प्रकाशनले पुन:मुद्रण गरेको त्यो पुस्तक दुर्लभ भइसकेको रहेछ । त्यो पुस्तक पोखरामा चाहिँ भेटियो ।
पहिलो कथा ‘राजकुमार दिक्पाल’को छ । आखिरी भने ‘बाँदर्नी मैया’को । बीचमा अन्य थुप्रा कथा थिए, राजा सतल सिंह, महारानी केशवत्ती, लाटो–बुङ्गो, शिशिर–वसन्त आदि । यी कथामध्ये ‘बाँदर्नी मैया’को कथा मलाई बडो घत लाग्यो ।
कथामा एउटा राजाका सात भाइ छोरा छन् । उनीहरूको बिहे गर्ने उमेर भएछ । राजाले सबै छोरालाई भनेछन्– ‘तिमीहरूले आ–आफ्नो लक्ष्यमा वाण हान । त्यो वाण जुन घरमा ठोकिन्छ, त्यसै घरको कन्यासँग तिमीहरूले अनिवार्य विवाह गर्नुपर्छ ।’
राजाको यस्तो उर्दी किन भयो ? त्यसको व्याख्या छैन । राजहठको अगाडि कसको के लाग्छ ? सातै भाइले वाण हाने । ६ भाइको वाण राजदरबार, धनाढ्य, जमिनदार, मन्त्री जस्ताका घरमा गएर लागेछ । तर कान्छो भाइको वाण भने एउटा रुखमा लाग्यो । त्यो रुखको टोड्कामा एउटी बाँदर्नी भेटिइन् । राजाले ‘तैंले यही बाँदर्नीसँग विवाह गर्नुपर्छ’ भने । कान्छो राजकुमारले आफ्नो भाग्य सम्झेर सहर्ष स्विकार्‍यो र ‘बाँदर्नी मैया’लाई विवाह गरेर ल्याइयो ।
विवाहको उपलक्ष्यमा प्रत्येक भाइले भोज दिनुपर्ने भयो । ६ भाइले आ–आफ्नो पालामा एकदमै भव्य भोज दिए । यिनीहरूको विवाह सम्भ्रान्त परिवारसँग भएको थियो । हुनेखानेकै छोरी भएपछि गतिलो भोज दिन कुनै गाह्रो थिएन । कान्छोलाई भने आपत् पर्‍यो । बाँदर्नी मैयाले कसरी भोज दिने ? के पकाउने ? के जान्ने ? कान्छा कुमार निन्याउरो भएर बसेका थिए । बाँदर्नी मैयाले लख काटिन् र भनिन्– ‘तपाईं निराश हुनु पर्दैन । म महाराजलगायत सबैलाई दंग पार्ने भोज दिन सक्छु । तपाईं भोजको सामग्रीको पनि चिन्ता नगर्नुस् । सबैको व्यवस्था गर्छु । तर म निस्केको रुखको टोड्कामा यो ‘चिनो’ लगेर हाल्दिनुस् । र एकैचोटी भोज खाने बेलामा आउनुहोला ।’
राजकुमारले श्रीमतीको निर्देशनअनुसार त्यही रुखको टोड्कामा उनले दिएको ‘चिनो’ राखिदिएर केही समय उतै यताउति घुमफिर गरे । साँझपख घर आउँदा छक्क परे । घर अत्यन्तै सुन्दर पाराले सजिएको थियो । थरीथरीका पकवान र भोजन थिए । भव्य भोज थियो ।
भव्यताको विस्तृत व्याख्या भने कथामा छैन । अहिले सोच्दा के लाग्छ भने अरू ६ भाइको सुन र चाँदीको थाल र कचौरा थिए होला । यी बाँदर्नी मैया प्राकृतिक परिवेशमा हुर्केकीले चिटिक्क परेको हरियो टपरी, बोहोता र दुनाहरू बनाएकी थिइन् कि । जे होस्, राजा–रानी लगायत राजकुमार र उनका श्रीमतीहरू बाँदर्नी मैयाको चाँजोपाँजो देखेर छक्क परे । त्योभन्दा पनि आश्चर्यजनक, बाँदर्नी त बाँदर्नी नै देखिएकी थिइनन् । एकदमै गतिलो, सुन्दर, परिष्कृत पोसाक लगाएर हिँडेकी थिइन् । सुषमा र सुरुचीमा सबैलाई उछिनेकी थिइन् ।
खाना–साना खाएर हिँड्ने बेलामा दाजुहरूले कान्छो राजकुमारलाई भनेछन्– ‘यो को हो ? यो त मायाविनी जस्तो छ । कतै बोक्सी त होइन ? हिजोसम्म झुस्स परेकी बाँदर्नीजस्ती, आज एकाएक यस्तो मोहिनी कसरी भइन् ? तिमीले यसको खोज–तलास गर । यसले हामीलाई छल पो गर्दै छ कि † कुनै किचकन्डी पो होकि ! तिमीले यसको भोटो (बाँदर्नीका रूपमा लगाइएको लबेदा) खोज ।’
यसरी दाजुहरूले एक भएर भाइको मनमा विषालु शंका हालिदिए । ‘शंकाले लंका डढाउँछ’ भन्ने हाम्रो उखान नै छ । अब यी कान्छा कुमारले के डढाउने हुन् ?
दिनभरको त्यत्रो कामले थकित बाँदर्नी मैया मस्त निदाइन् । शंकाग्रस्त कान्छा कुमारका मनमा खुलदुली भइरह्यो । एकाएक यसको रूप कसरी बदलियो ? यत्रो बन्दोबस्त कसरी गरिन् ? उनी रातभर घरमै खोज–तलास गर्न थाले । त्यसरी खोज–तलास गर्दै जाँदा बाँदर्नीको भोटो एउटा कुनोमा भेटियो । साँझैदेखि शंकाग्रस्त कान्छा राजकुमार पूर्वाग्रहले ग्रस्त थिए ।
केही सोच–विचारै नगरी उनले त्यो भोटोमा आगो झोसे । भोटो सल्किन थाल्यो । जति भोटो सल्किँदै गयो, उति बाँदर्नी मैया छट्पटिन थालिन् । उसलाई पोल्न पो थालेछ । त्यो पीडालाई खप्न नसकी अइया–आत्था गर्दै उफ्रिन थालिन् । ढोका फोडेर वायुवेगले कुदिन् । राजकुमार पछ्याउँदै गयो । जाँदा–जाँदा अगाडि एउटा ठूलो अजङ्गको दह रहेछ । बाँदर्नी मैया त्यसै कुण्डमा हामफालिन् । हेर्दाहेर्दै बाँदर्नी मैया अलप भइन् । कान्छा कुमार किंकर्तव्यविमुढ भए । इन्तु न चिन्तु भएर बसिरहे ।
यो बाँदर्नी मैया भनेको को हो ? कान्छा राजकुमारले बाँदर्नीको भोटो डढाउने भनेको के हो ? बाँदर्नी मैया अलप भएर कहाँ गइन् ? कहिले आउँछिन् ? कि आउँदिनन् ? यी कुरा बाँकी कथामा अवश्य थपिएको छ । तर यो कथा कहिले, कहाँ र कुन परिवेशमा कसले कल्पना गर्‍यो ?
प्रत्येक समाजमा लामो समयदेखि विभिन्न जाति र प्रजातिहरूको बिहेवारी भइराखेका छन् । चीनलगायत देशहरूमा बाँदर्नी मैयाहरूको यस्तै मिल्दोजुल्दो कथा छ । कुनै तथाकथित ‘सभ्य’ राजपुत्रले सिकार खेल्न जाँदा त्यहीँ कुनै उद्दाम प्रकृतिकी छोरीसँग प्रेममा पर्नु आफैमा अनौठो होइन । मानिसको मौलिक जात भनेको जम्मा दुइटा हो, एउटा स्त्री र अर्को पुरुष ।
जात र जातीयताका अरू कुरा सर्वथा कृत्रिम हुन् । पुरुष र नारीका बीच दुर्नीवार आकर्षणले सृष्टि चलेको छ । यो आकर्षण नहुँदो हो त मनुष्य उहिल्यै लुप्त भइसक्थ्यो । तर यो सब बिर्सिएर यता आएर हाम्रो समाजमा जाति र वर्गका आधारमा पूर्वाग्रह उत्पन्न भएको छ । बाँदर्नी मैयाको कथा यसतर्फको संकेत पनि हो ।
हाम्रो समाज बाहुन, क्षत्री, ठकुरी, राई, गुरुङ, मगर, मधेसी, पहाडे आदि विभिन्न पहिचानमा बाँडिएको छ । यिनीहरूबीच अन्तरजातीय विवाह पनि भएको छ । यस्ता विवाहले समाजलाई अगाडि बढाएको छ । तर पनि यस्तो विवाह सधैं शंका र विरोधको सिकार भएको छ । स्वयम् मेरो परिवारमा एक होइन, अनेक अन्तरजातीय विवाह भएका थिए ।
मेरी एक ज्याआमा गुरुङ्नी हुनुहुन्थ्यो, बडो शालिन स्वभाव तथा दक्ष व्यक्तित्वकी श्वामिनी हुनुहुन्थ्यो । मेरा परपितामह कुलदीप गिरीले जीवनको वास्तविक संस्कार उनैबाट प्राप्त गर्नुभयो । तर ती महिलालाई आफ्नो मूलघर भने पुर्‍याउन सक्नुभएन । यस्ता तथाकथित अनमेल विवाहमा बाँदर्नी मैयाको कथाको पूर्वाभास थियो कि ?
बाँदर्नी मैयाको कथामा विविध सांस्कृतिक सम्मिश्रणको झल्को पाइन्छ । यो बाहेक पनि परम्परागत समाजमा बुहारीलाई पूर्वाग्रहका साथ हेर्ने अनुभव पनि भेटिन्छ । बुहारीको नियति बुझ्न ‘रूपमती’ पढ्नु पर्दैन । आफ्नो घरमा पुलपुलिएर हुर्केकी छोरी जब बुहारीको भूमिकामा जान्छिन्, उनको दशा के हुन्छ ? बुहारीबारे नेपाली समाजमा उखान छ– नौली बुहारीको नौपुला घाँस, बस्दै जाँदा जगल्टाको नाश । हाम्रो समाजमा बुहारीको नियति एउटा र छोरीको नियति अर्को हुन्छ । छोरी पवित्र हुन्छे ।
उसको बारेमा कुनै नकारात्मक कुरा सोच्न सकिँदैन । बुहारीका बारेमा सकारात्मक कुरा सोच्न गाह्रो छ । तसर्थ बाँदर जातिकी छोरी, पहिरनसमेत बेग्लै भएको एक्कासी नयाँ घरमा आउँदा त्यस घरमा चल्दै आएको चलनबारे केही थाहा हुँदैन । खानाको परिकार, भोजनको स्वाद आदि केही थाहा हुँदैन । तर उसले देखेको–सिकेको भोजन यहाँ मान्य हुँदैन । चोखो र बिटुलो अलग–अलग छन् । गर्न हुने र नहुने कुरा बेग्लै छन् । ‘पानी खानु मूलको बिहे गर्नु कुलको’ भन्ने हाम्रो समाजमा उखानै छ । यो कथा यस उखानका विरुद्ध उभिएको छ ।
रुखको टोड्काबाट ल्याइएकी बाँदर्नी मैयाको योग्यता, सीप, बनाएको परिकार, लुगाफाटो राजपरिवारमा स्वीकृत भएन । उनको उपहास भयो । उनको योग्यता शंकास्पद भयो । उनलाई बोक्सी र परचक्री भनियो, राम्रो नजरले हेरिएन । त्यतिले नपुगेर उनको भोटोसमेत डढाइयो । अर्को शब्दमा भन्दा उनको परिचय, अस्मिता, पहिचान नै नष्ट पारियो । नयाँ परिचय, अस्मिता, पहिचान थोपर्ने कोसिस गरियो । उनलाई लुगा फेर्न विवश गराइयो,बोली परिवर्तन गराइयो । प्रत्येक नौली बुहारीले नयाँ घरमा जाँदा, खासगरी विभिन्न सांस्कृतिक परिवेशभएको घरमा जाँदा यो भोगेको हुनुपर्छ । निश्चय पनि कथाकारले यो कथा कथ्दा नयाँ बुहारीको नियतिलाई ध्यानमा राखेको थियो ।
तत्काल कथाकारले अनुभूतिजन्य एउटा अर्को कुरो लेखेको छ । दाजुहरूले उचाले होला । तर एउटै ओछ्यान सुत्दै आएकी त्यत्रो योग्यता भएकी श्रीमतीलाई ‘तिमीले कसरी यत्रो चमत्कार गर्‍यौ’ भनेर नसोधी उनको भोटो खोज्ने र डढाउने काम किन गर्‍यो, त्यो कान्छो कुमारले ? अनेकन कथाकारले पति र पत्नीको यस किसिमको गलतफहमीका बारेमा कथा लेखेका छन् । शेक्सपियरको प्रसिद्ध नाटक ‘ओथेलो’ यस्तै शंकामा आधारित छ । यता आएर ‘ओथेलो’को हिन्दी रूपान्तरणको सिनेमा पनि बनिसकेको छ– ओमकारा । कान्छो कुमार लगभग ओमकारा हुन पुग्यो ।
बाँदर्नी मैयाको कथाको दोस्रो भागले पति र पत्नीको सम्बन्धका विषयमा टिप्पणी गरेको छ । हाम्रो विवाहको एउटा खास किसिमको परिपाटी छ । विवाहमा मन्त्र पढिन्छ । बाँदर्नी मैयासँग औपचारिक रूपले विवाह भयो–भएन लेखेको छैन । तर राजाको दरबारमा आइसकेपछि भयो होला । विवाहको मन्त्र पनि पढियो होला । विवाह मण्डपमा वर–वधुले सातखेप अग्निको प्रतिक्षणा गर्दा मन्त्र पढिन्छ । त्यस्ता मन्त्रमा पारस्परिक विश्वास, आजीवनको मैत्रीको प्रतिज्ञा सामेल रहन्छन् ।
विवाहमा बेहुला–बेहुलीलाई बीचमा गाँठो पारेर एउटा कपडाद्वारा बाँधिन्छ । त्यसरी गाँठो पार्नुको अर्थ हो, अब तिमीहरू दुई दिशामा जान खोज्यौ भने यो गाँठो झन् कसिन्छ । हामीबीच कुनै कुरा लुकाइनेछैन । आजैदेखि मेरो सम्पत्ति तिम्रो र तिम्रो सम्पत्ति मेरो हो आदि तर यो राजकुमारले आफ्नी पत्नीलाई तिम्रो वास्तविक रहस्य के हो भनेर सोध्न पनि भ्याएन ।
बाँदर्नी मैया अलप भएपछि कान्छो राजकुमार खुबै यत्रतत्र भौंतारियो । धेरै दिनपछि एउटा जोगी भेटिए । ती जोगीलाई राजकुमारले आफ्नो इतिवृत्तान्त सुनायो । जोगीले भनेछ– ‘सबै समाजको नियम–कानुन बेग्लाबेग्लै हुन्छ । तिमीले भनेको बाँदर्नीको आफ्नै जाति–प्रजाति छ । बिस्तारै सबै ठीक भएर जान्थ्यो । आत्तिएर उनको भोटो डढाउनेतिर लागेछौ । तिमीले ठूलो गल्ती गर्‍यौ ।’
राजकुमारले चित्कार्दै जोगीलाई भनेछ– ‘म तिनलाई कसरी भेट्न सक्छु ? आफ्नो प्रायश्चित्त कसरी गरूँ ?’
जोगीले भनेछ– ‘तिनी आफ्नो बाउ–आमाकहाँ छिन् । आगाले जलेर मर्ने र बाँच्ने दोसाँधमा छिन् । यो मलम तिनको जीउमा लगाइदियौ भने तिनी पहिलेजस्तै स्वस्थ हुन्छिन् तर त्यहाँ जान एकदमै असम्भव छ ।’
तर कथामा असम्भव फेरि सम्भव हुन्छ । एउटा अर्को जोगीले उनलाई उड्ने खराउ दिए । अर्काले लड्ने तलबार दिए । यस्तै विभिन्न अप्रत्यासित ठहर र बहरबाट राजकुमारले सहायता पाए । ग्रिक दन्त्यकथामा साइकी र एफ्रोदितको कथा छ । सासू–बुहारी भएका ती महिलाद्वयको पेचापेच छ । सासूको पेलानमा परेकी बुहारीलाई कमिला, चराचुरुङ्गी र खोलानालासमेतले सघाउँछन् । नेपाली दन्त्यकथामा भने जोगीहरूको बाक्लो उपस्थिति छ । जे होस्, राजकुमारले आफ्नी पत्नीलाई फेरि फिर्ता पायो ।
विवाहमा भनेजति दाइजो नल्याएकामा मट्टितेल हालेर डढाइएका बुहारी आज पनि हाम्रो समाजमा सुनिन्छ–देखिन्छ । यस्तै महिलाको अवस्थामा बाँदर्नी मैया पुगेकी थिइन् । एकातिर बाँदर्नी मैयाको पोलिएकोभोटोले दाइजो र इज्जतका अभावमा पोलिएका नवविवाहितातिर संकेत गर्छ । अर्कोतिर मनुष्यको जीवनमा चमत्कार हुन्छ भन्ने मान्यता र उदाहरणले कथालाई सुखान्त बनाउँछ ।
प्रत्येक दन्त्यकथा कुनै न कुनै रूपमा चमत्कारमा विश्वास गर्छ । तथाकथित वैज्ञानिक युगमा हामीलाई चमत्कारमा विश्वास छैन, आस्था पनि छैन । तर मानवजाति चमत्कार र आस्थाबिना जीवित रहन सक्छ ? जीवित भए पनि जाग्रत रहन सक्छ ? बाँदर्नी मैयाको कथाले यस्ता प्रश्नलाई उठाएको छ ।
बोधविक्रम अधिकारी यस कथाका संकलक मात्र रहनुभएको हुन सक्छ । यस्ता कथा हरेक संस्कृतिमा पाइन्छन् । बाँदर्नी मैयाको यो कथा चिनी लोककथामा पनि केही फरकका साथ भेटिन्छ तर बोधविक्रम अधिकारीले मेरो सिंगो पुस्तालाई अत्यन्त सरस शैलीमा यो कथा पढाउनुभयो । उहाँको गुन तिरिनसक्नु छ ।
प्रकाशित : माघ ५, २०७५ ०९:३७
आफ्ना जीवनकालमा नेहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बुद्धिजीवीहरूका नायक थिए । गान्धीले समकालीन बुद्धिजीवीहरूबाट ज्यादात्तर उपहास मात्र प्राप्त गरे तर यताका वर्षमा नेहरूको वैचारिक अवदान विस्मृतप्राय: छ । गान्धीका ‘उटपट्याङ’ कुराले नित्य पालुवा फेर्दै छन् ।
आश्विन २०, २०७५ प्रदीप गिरि
काठमाडौँ — गान्धीलाई बुझ्नु कठिन छ । ‘आधुनिक’ कहलाउने मानिसका निम्ति अझ विशेष कठिन छ । १९३६ ई. मा पण्डित जवाहरलाल नेहरूको बहुचर्चित आत्मकथा छापिएको थियो । त्यसमा अनेकन ठाउँमा गान्धीको प्रसंग छ । त्यस्ता प्रत्येक उल्लेखमा नेहरूले गान्धीको व्यक्तित्वलाई लिएर विस्मय व्यक्त गरेका छन् । नेहरूका अनेकन टिप्पणीमध्ये निम्नलिखित विशेष पठनीय छ :
‘गान्धीजी साँच्चै बुझ्नै नसकिने मानिस हुनुहुन्छ । आधुनिक मनुष्यका निम्ति उनको बोली–वचन, रहन–सहन दुरुह छ । तर फेरि जोसुकै उपर उनको अद्वितीयता र महानताको छाप परिछाड्छ । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले उनको नेतृत्व सहर्ष स्वीकार गरेको छ । उनलाई हामीले सारा अधिकार दिएका छौं । उनका पिठ्युँ पछाडि हाम्राबीच टिकाटिप्पणी चलिरहन्छ । उनका उट्पट्याङ बानी–व्यहोरा र बोलचाल समेतले हामीलाई चिन्तित बनाउँछ । स्वाधीन भारतमा उनका यस्ता झक्की क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न सकिँदैन भनेर मजाकिया शैलीमा भए पनि हामी आपसमा कुरा गरिरहन्छौं ।’
अहिले पढ्दा पनि नेहरूको उक्त टिप्पणी कठोर प्रतित हुन्छ । अझ १९३६ मा यो वक्तव्य कस्तो देखियो होला । त्यसपछि पनि थप १२ वर्ष गान्धी र नेहरूले सँगै काम गरे । उनीहरूका बीच अनेकानेक मतभेद थिए । स्वाधीनताको पूर्वसन्ध्यामा गान्धी र नेहरूका बीच भावी भारतको तस्बीरलाई लिएर पत्राचार भएको थियो । दुवैमा पटक्कै मतैक्य थिएन । तर पनि नेहरूसँग गान्धीको विकल्प थिएन । भारतीय जनतामा गान्धीका उपर अद्भुत पत्यार थियो । गान्धीका काँधमा उक्लिएर नेहरू विख्यात राजनेता भएका थिए ।
नेहरू बाहेक पनि अनेक प्रबुद्धजनले गान्धीलाई आधुनिक युगका निम्ति सर्वथा अनुपयुक्त प्राणी भनेर चित्रण गरेका थिए । एम.एन. राय र डा. अम्बेदकरले पनि । आज पनि गान्धीलाई परम्परावादी र प्रतिगामी भन्ने बुद्धिजीवीहरूको प्रभुत्व छ । गान्धीको देहान्तपछि नेहरू स्वाधीन भारतका एकमात्र नेता भए । प्रधानमन्त्री नेहरू भारतका प्रमुख कार्यकारी त छँदै थिएँ, उनको सोच र सपनाका पछाडि प्रारम्भिक दशकहरूमा सिंगो भारत समर्पित थियो । नेहरूको बौद्धिक र चमत्कारिक व्यक्तित्वले युरोप र अमेरिकालाई समेत मुग्ध बनाएको थियो । नेहरूले गर्दा नै गान्धी भारतको ‘राष्ट्रपिता’का रूपमा अझै पुज्य छन् । गान्धीको देवत्वकरण भएको छ ।
देवत्वकरण वा राक्षसीकरण दुवैले मनुष्यसँग अन्याय गर्छ । गान्धीले गरेको र भनेको कुरा कहाँ गर्न सकिन्छ र ? उनी त भगवान थिए जस्ता कुरा हुनथाले । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले गान्धीलाई पुज्य बनाएर उनको क्रान्तिकारी उत्तराधिकारीलाई धुमिल बनायो । नेपालमा पनि गान्धी एक असल तर निरीह, दुर्बल र अप्रासंगिक छवि भएका मानिस छन् । उनको सम्झना तुलसी मेहरसँग अविञ्छिन्न रूपमा गाँसिएको छ ।
आफ्ना जीवनकालमा नेहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बुद्धिजीवीहरूका नायक थिए । गान्धीले समकालीन बुद्धिजीवीहरूबाट ज्यादात्तर उपहासमात्र प्राप्त गरे । तर यताका वर्षहरूको बौद्धिक विमर्शको अवलोकन गर्दा एउटा आश्यर्चजनक तथ्य अगाडि आउँछ । नेहरूको वैचारिक अवदान विस्मृतप्राय: छ । गान्धीका ‘उट्पट्याङ’ कुराहरूले नित्य नयाँ पालुवा फेर्दैछन् । पश्चिमका अत्यन्त मेघावी प्राज्ञहरूले गान्धीलाई आफ्नो शोध–विषय बनाएका छन् । भारतीय बौद्धिक जगतले पनि ढिलो भए पनि गान्धीको महनीयतालाई स्वीकार गरेको छ । नित्य गान्धीको पुनव्र्याख्या भइरहेको छ । यस्ता पुनव्र्याख्याले गान्धीलाई उत्तर–आधुनिक चिन्तनसँग जोडेको छ । लोयाड आई. रुडोल्फ र सुस्यानले आफ्नो पुस्तकलाई ‘दि पोष्ट मार्टन गान्धी’ भनेर नामकरण गरेका छन् ।
गान्धी निश्चय आज दुनियाँमा विश्व विजयी ठहरिएको आधुनिक सभ्यताका कडा आलोचक थिए । गान्धी यस पद्धतिलाई सभ्यताको संज्ञासमेत दिन तयार थिएनन् । गान्धी १९३० मा बेलायत पुगेका थिए । एक बेलायती पत्रकारले उनलाई आधुनिक सभ्यताबारे प्रश्न गरेका थिए । गान्धीको प्रस्ट उत्तर थियो– ‘यो एउटा मनचिन्ते परिकल्पना मात्र हो ।’ गान्धीको भनाइ थियो– आधुनिक मानिसलाई सभ्य भन्न गाह्रो छ ।
१९३० मा बेलायतको माटोमा उभिएर गान्धी के भन्न खोज्दै थिए ? गान्धीको भनाई प्रस्ट थियो– सडक, रेल, गाडी, पानीजहाज र हवाइजहाज हुँदैमा समाज सभ्य हुँदैन । मर्सिडिज गाडीले गर्ने काम उहिले वयलगाडीले गथ्र्यो । पानीजहाजको ठाउँमा युगौंदेखि डुंगा चलिरहेको हो । सभ्यता र प्राविधिक विकास एक–अर्काका पर्याय होइनन् । सभ्यता मानवता र नैतिकताको विस्तार हो । भौतिक समृद्धि चाहिन्छ, तर त्यो त्यसपछि आउने कुरा हो । स्वाधीन भारतमा गान्धीको उत्तराधिकारलाई लिएर जयप्रकाश नारायण र डा. लोहियाले जवाहरलाल नेहरूलाई चुनौती दिएका थिए । भारतका नव–गान्धीवादीहरूले जयप्रकाश र लोहियाबाट प्रेरणा लिएर आफ्नो भाष्य अगाडि सारेका छन् ।
विश्वमा यस समय प्रकृति र पर्यावरणप्रति बढ्दो चिन्ता छ । पृथ्वीले थेग्ने विकास हुनुपर्छ भन्ने कुरा सर्वत्र सुनिन्छ । दिगो विकास विचारधाराको केन्द्रमा गान्धी छन् । युरोपको हरित आन्दोलनले गान्धीको प्रेरणा स्वीकारेको छ । मार्टिन लुथर किङ जुनियरले अमेरिकामा गान्धीको नाम लिएर काला जातिको अधिकारको संघर्ष चलाए । नेल्सन मन्डेलामा विश्वले गान्धीको प्रतिरूप देख्यो । दलाई लामा आज पनि जहाँ जान्छन्, त्यहाँ गान्धीको झझल्को दिन्छन् । उन्मक्त उपभोक्तावादको अन्धताले पृथ्वी पिल्सिएकी छन् । गान्धी मनसा, वाचा र कर्मणा यस प्रवृत्तिको विरोधमा थिए ।
बीपी कोइरालाले आफ्ना आत्मकथ्यमा गान्धीलाई बारम्बार सम्झनुभएको छ । भोला चटर्जी र तीर्थङ्कर मुखर्जीलाई दिइएको आखिरी अन्तर्वार्ताहरूमा आफू फेरि गान्धीका समिप पुगेको घोषणा गर्नुभएको छ । गान्धी–माक्र्स र गान्धी मेरो वैचारिक यात्राको रेखाचित्र हो भन्नुभएको छ । बीपी कोइरालाको वैचारिक–यात्रा–वृत्त उहाँको एकांकी अनुभव होइन । बीपी भारतमा रहँदा कुनै समय कांग्रेस सोसलिस्ट पार्टीसँग सम्बद्ध हुनुहुन्थ्यो । त्यस पार्टी नेतृत्वका लगभग सबै ‘कट्टर माक्र्सवादी’ थिए । तर गान्धीको मृत्यु भएको २५ वर्ष नबित्दै सबै गान्धीतर्फ आकृष्ट भए ।
गान्धीलाई कुनै एक पत्रकारले उहिल्यै सोधेको थियो– ‘भारत बेलायतजस्तो कहिले बन्ला ?’ गान्धीको जवाफ स्पष्ट थियो– ‘भारतले बेलायत बन्ने सपना हेर्नु हुँदैन । त्यो दुस्वप्न मात्र हुनेछ । भारत लगायत अनेकानेक मुलुकको शोषणमा सानो बेलायतको विलास–वैभव आधारित छ । भारत जस्तो विशाल देशले आजको युगमा कसको शोषण गर्ने ?’ गान्धीले यतिमात्र भनेनन्, थपे– ‘यदि कुनै चमत्कारले भारत बेलायतजस्तो बनिहाल्यो भने पनि त्योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अर्को हुन सक्दैन । बेलायतको जीवनशैलीलाई अनुकरणीय मान्न सकिँदैन । बेलायतले भौतिक वस्तु बटुल्नु र भोग गर्नुलाई सफलता ठानेको छ । मनुष्यको सफलता त्यो हुँदै होइन । मनुष्य आफूलाई चिन्न जन्मिएको हो ।’
आधुनिकतावादीमध्ये माक्र्सवादीलाई गान्धी सधैं तिरस्करणीय रहे । त्यसका अनेकन कारण थिए । गान्धी हिंसालाई हरेक हालमा त्याज्य, निन्दनीय र प्रत्युत्पादक सम्झिन्थे । हिंसा भनेको क्रान्तिको सँुडेनी हो भन्ने कम्युनिस्टका निम्ति गान्धी क्रान्ति–विरोधी नेता थिए । रामराज्य चाहने गान्धी प्रतिक्रियावादी थिए । गान्धी बातैपिच्छे सार्वभौम नैतिकता उड्कन्थे । गान्धीलाई वर्ग–संघर्षमा विश्वास थिएन । यो पनि क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूका निम्ति आपत्तिजनक थियो । सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कुरो अझ अर्को थियो– विकास भनेको के हो ?
पुराना माक्र्सवादी पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि मात्र समाजवादको प्रादुर्भाव हुन्छ भन्छन् । त्यति मात्र होइन, माक्र्सवादीहरू पश्चिमी सभ्यतालाई मानव जातिको श्रेष्ठत्तम उपलब्धिका रूपमा लिन्छन् । माक्र्सले स्वयम् कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा तथाकथित सभ्यता भनेर पुँजीवादी सभ्यतालाई सम्बोधन गरेका थिए, यो अर्कै कुरो हो । त्यो अहिले पनि माक्र्सवादीलाई सम्झना छैन । गान्धी हाकाहाकी पश्चिमी सभ्यतालाई पापमूलक भन्थे । पुँजीवादी त त्यसको एउटा सानो उपपत्तिमात्र हो ।
माक्र्सवादीलाई गान्धीसँग अर्को आपत्ति थियो । माक्र्सवादका अनुसार कम्युनिस्टहरूले क्रान्तिको लगातार तयारी गर्नुपर्छ । निश्चित ऐतिहासिक घडीमा कम्युनिस्टले अगाडि बढेर राजसत्तामा कब्जा गर्नुपर्छ । दिव्य दस हजार वर्षमा त्रिपुरासुरका तीन पुर जोडिन्छन् । ती तीन पुर नजोडिँदासम्म दानवीय राज्यको विनाश सम्भव छैन । लेनिनले ‘वामपन्थी साम्यवाद एक बालरोग’ भन्ने कृतिमा क्रान्तिका पूर्वसर्तहरूको यस्तै चर्चा गरेका छन् । कम्युनिस्ट क्रान्तिको पूर्वसर्तका साथ निश्चित दिनको प्रतीक्षामा अक्सर अलमलिएका छन् ।
गान्धीलाई त्यस्तो कुनै दिव्य रथ वा घडीको प्रतीक्षा थिएन । अफ्रिकाको मारिट्जवर्ग भन्ने सहरमा त्यस अँध्यारो रातमा रेलबाट घोक्राइएका दिनदेखि उनी निरन्तर युद्धरत रहे । यस युद्धका दुइटा आयाम थिए । गान्धीको आत्मकथामा यी दुवै आयामको अविकल तस्बीर छ ।
मारिट्जवर्गको घटनाको सविस्तार वर्णन छ, आत्मकथामा । फस्ट क्लासको टिकट हुँदाहुँदै दक्षिण अफ्रिकाका नश्लवादी कानुनले उनलाई गाडीबाट घोक्र्याएको थियो । उनी भन्छन्– ‘पहिले त म डरले किंकर्तव्यविमुढ भएँ । पोकोपन्तुरो बोकेर घर फर्कौं भन्ने आयो । छेउछाउका छरिएका सामान टिप्ने आँट पनि भएन । भयंकर जाडो थियो । ओभरकोट थियो, तर त्यो एकातिर फ्याँकिएको थियो । त्यो ओभरकोट ओढ्ने आँट पनि भएन । गोराले फेरि गोद्छ कि भन्ने त्रास थियो । सिंगो रात थरथर काँपेरै काटेंँ ।’
बिहानपख हुँदा–नहुँदा उनमा एउटा अठोट उदायो । बरु मर्छु, तर लड्छु भन्ने । एकातिर उनले आफ्नो कायरतासँग लड्नुपरेको थियो । अर्कोतिर साम्राज्यवादीको नश्लभेदी कानुन थियो । गान्धीलाई हृदय परिवर्तनको अनुभव भयो– पहिले आफूलाई जित अनि अरूलाई जितौला । परिवर्तन गर्नुभन्दा अघि आफूमा परिवर्तन गर ।
आलोचकहरूले गान्धीलाई टाटा र बिड्लाको हृदय परिवर्तन गर्ने निष्फल प्रयास गरेकोमा मजाक उडाउँथे । गान्धी निश्चय त्यसो गर्थे । गान्धीको मृत्युसमेत पनि बिड्ला भवनमा भयो । तर वर्षमा दस दिन बिड्लाकहाँ बसे भने दस महिना दलित र पीडितको बस्तीमा भेटिन्थे गान्धी । गान्धीले हजारौं भारतीयलाई सडकमा उतारे । डरपोक किसान र लुते मजदुरको हृदय परिवर्तन भएको थियो । महिलाको घुम्टो उघ्रेको थियो । जनसंख्याका हिसाबले त्यस प्रतिशतमा कुनै क्रान्तिमा जनता खास गरेर महिला उत्रिएका छैनन् ।
क्रान्तिकारीलाई गान्धीको ईश्वरसँगको लसपस मन पर्दैन । उनी दिनरात राम–राम भजन–पुजन गरिराख्थे । उनका विरोधी यसलाई पाखण्डका रूपमा हेर्थे । उनका सहयोगीहरू पनि शंकालु थिए । उनले एकदिन वाक्क भएर भन्नुपरेको थियो– रामप्रतिको मेरो निष्ठा म मरेको दिन थाहा होला । नभन्दै नाथुराम गोड्सेले गोली हान्दा उनको मुखबाट दुई शब्द निस्कियो– हे राम !
गान्धीको ईश्वर पाखण्ड हो कि भनेर नेहरू बाहेक अरू पनि थुप्रैले शंका गरेका छन् । गान्धीको कृतित्वलाई उनको आस्था र आस्तिकतासँग छुट्याउने प्रयास पनि भएको छ । तर त्यस्ता प्रयास फलोत्पादक होइनन् । बरु गान्धीले राम भनेर के भन्न खोजेका थिए ? राम भन्ने संज्ञा गान्धीले थालेका होइनन् । तुलसीदासले उत्तर–भारतमा रामलाई घर–घर पुर्‍याए । उनै तुलसीदासले रामको कथा थाल्नुअघि राम को हुन् त भनेर प्रश्न गरेका छन्– ‘एक राम अवधेश–कुमारा’ भनेर राम–विमर्श प्रारम्भ गरेका छन् । गान्धीको राम अझ अगाडि छन् । गान्धी प्रस्ट भन्थे, सत्य नै ईश्वर हो, सत्य नै राम हो ।
आफ्नो राजनीतिक जीवनको प्रारम्भमा गान्धीले ‘गड इज ट्रुथ’ भनेका थिए । उत्तराद्र्धमा यस्तो रहेन । उनले भन्न थाले– ‘ट्रुथ इज गड’ ।
गान्धीको राम–विमर्शका सन्दर्भमा गोपाराजु रामचन्द्र राव प्रासंगिक छन् । राव भारतमा गोराका नामले जानिन्छन् । उनी नास्तिक थिए । नास्तिक सभा स्थापना गरेका थिए । गान्धीवादी थिए । सर्वोदयका समर्थक थिए । गान्धी र उनका बीचमा भएको बहसलाई उनले पुस्तकका रूपमा छापेका छन् । गोरा गान्धी आश्रममा अतिथि भएर गइरहन्थे । गान्धीले उनलाई इच्छा भोजनको व्यवस्था मिलाउँथे ।
गीतामा ‘विद्या विनय सम्पन्न ब्राह्मण सम्पन्न...’ भन्ने प्रसिद्ध श्लोक छ । त्यसै परम्परामा गान्धी भन्थे– आफ्ना अगाडिका मानिसमा ईश्वर नदेख्ने मनुवाले जंगलमा कुन ईश्वर भेट्ला ? गान्धी ईश्वरलाई भेट्न सार्वजनिक जीवनमा उत्रिएका थिए ।
गान्धी झन्डै पचास वर्ष सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय रहे । उनी हिजोको कुरामा आज अडिग रहँदैन थिए । उनी ढुक्क भन्थे– म सधैं केही न केही सिक्दैछु । जीवन प्रारम्भिक वर्षमा उनका व्यक्तित्वमा अनेकन आपत्तिजनक बोली–व्यवहार देखिएका छन् । दक्षिण अफ्रिकाको जेलमा बस्दा उनले त्यहाँका अफ्रिकन कैदीप्रति अपमानजनक भाषा प्रयोग गरेका चिठ्ठीहरू भेटिएका छन् । बुढेसकालमा उनी आफ्ना नातिनी भन्न मिल्ने तरुनी केटीहरूसँग नाङ्गै सुत्थे भन्ने जानकारी छ । गान्धीको राजनीतिक गतिविधि विवादास्पद छन् । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसलाई आफ्ना इच्छा अनुसार चलाउन उनी जेसुकै पनि गर्न सक्छन् भन्ने एम. एन. राय, सुवास बोस र अम्बेदकरले लेखेका छन् । यी महानुभाव आफै स्वाधीनता आन्दोलनका दिग्गज थिए ।
गान्धी एक मनुष्य थिए । एउटा मानिसमा हुने यावत दुर्गुण उनमा थिए । तर उनी बाहिरियासँग भन्दा मर्मान्तक रूपमा आफूसँग लड्थे । उनको आत्मकथा र अन्य लेखनसमेत त्यस लडाइँको अविकल तस्बीर छ ।
गान्धी भारत विभाजनका विरोधी थिए । उनले अनेकनपटक भनेका थिए– मेरो लासका उपरमात्र भारतको विभाजन हुनसक्छ । तर आखिरी घडीमा टिक्न सकेनन् । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको कार्यसमितिले विभाजनको निर्णय गर्दा गान्धी त्यस बैठकमा सहभागी थिए । त्यहाँ उपस्थित धेरै लेखकले त्यस बैठकको परिघटनाको विवरण लेखेका छन् । डा. लोहियाको ‘भारत विभाजनका अपराधी’ भन्ने पुस्तकमा त्यसको मार्मिक वर्णन छ । लोहियाले गान्धीलाई पनि दोष दिएका छन् । गान्धीले पनि आत्मसमर्पण गरे भन्ने उनको आरोप छ ।
गान्धीको व्यक्तिगत मान्यता स्पष्ट थियो, धर्म कुनै पनि राष्ट्रको अस्मिता हुन सक्दैन । धार्मिक–जातीय भेदभावभन्दा खतरनाक कुरा अर्को केही हुँदैन । गान्धीले हिंसाको स्रोतलाई नजिकबाट अध्ययन गरेका थिए । हिटलर र मुसोलियनको बर्बरता देखेका थिए । चेतावनी दिएका थिए, ‘मानिसको एउटै पहिचान मनुष्यता हुन्छ, अर्को पहिचान नखोज ।’
भारत स्वाधीन भएको दिनमा गान्धी नुवाखोलीमा थिए । नुवाखोली आज बंगलादेशमा पर्छ । त्यतिबेलाको पाकिस्तानमा । दिल्लीमा आजादीको जलसा मनाइँदै थियो । गान्धी नुवाखोलीमा भट्किँदै थिए । त्यतिबेला रवीन्द्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध कविता ‘तवे एकला चलो रे...’ उनको प्रिय गीत थियो । अन्तत: मुस्लिम हितको रक्षा गरेको अत्तो लगाएर एउटा हिन्दुले उनको हत्या गरे । यथार्थ अर्कै थियो । गान्धी नत हिन्दु थिए, न मुसलमान ।
प्रोफेसर आइन्सटाइनले गान्धीबारे एक विख्यात टिप्पणी गरेका छन् । नेहरूको अन्योलमा राजनीतिज्ञको शंका थियो । आइन्सटाइनको मूल्यांकनमा एक दार्शनिक–वैज्ञानिक प्रकट भएका छन् । आइन्सटाइन भन्छन्– ‘आउने पुस्ताले पक्कै पत्याउने छैन । हाड, मासु र रगतले बनेको देह लिएर यस्तो मानिस यो धर्तीमा एकदिन हिँड्याे होला भनेर आगामी पुस्ताले पत्याउने छैन ।’
जन्मोत्सवका दिन, दुई अक्टुबरका दिन गान्धीलाई पूजा गर्ने खाँचो छैन । बरु निन्दा गरे हुन्छ । निन्दा र पूजाको ओइरोमा मोहनदास करमचन्द गान्धी भन्ने मानिस हराउन सक्छन् । तर साँच्चै यही छरछिमेकमा डेढ सय वर्षअघि यस्तो मानिस जन्मिएको थियो भनेर सम्झनु र पत्याउनु गान्धीप्रति वास्तविक श्रद्धाञ्जली हुनेछ ।
प्रकाशित : आश्विन २०, २०७५ ०७:५४